Xiisadda Dhoollatusyada Militari ee ka soconaya Gacanka Kuuriya – Kasmo Newspaper
Xiisadda Dhoollatusyada Militari ee ka soconaya Gacanka Kuuriya
Updated - September 18, 2017 5:59 pm GMT
London (Kasmo), 4 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Maraykanka, F-35B, nooca Raadaarka ka dhuunta, iyo 2 nooca duqaynta Istrateejiga B-1B ayaa dabrid dhoollatus ah ka sameeyay hawada Kuuraiyada Koofureed.
Wakaaladda Wararka “yonhap”oo soo xiganaysa ilo-wareedyo qarsoon oo xukuumadda Seul ah ayaa sheegtay in dabridyadu digniin u yihiin Kuuriyada Woqooyi.
Diyaaradaha Maraykanka waxaa soo galbiyay 4 ka mid ah diyaaradaha dagaalka F-15K ee Kuuriyada Koofureed, ka hor intii ayan dib ugu laaban Saldhigayadii ay ka soo kaceen ee Japan iyo Guam.
Dhoollatusyada ayaa ku soo beegmaya 3 maalmood ka dib markii Pyongyang dul marisay Japan gantaal riddada Dhexe ah oo markii dambe ku soo dhacay Badda Pacific-ga.
Isla maanta waxaa Badweynta Pacific ka bilaabanaya qaybtii 2aad ee Dabridkii Badda Shiina-Russiya ee sannadlaha ahaa, (Naval Interaction 2017), kaas oo socon doona ilaa 26ka Septembar 2017.
Wasaaradda Gaashaandhigga Ruushka ayaa shaaca ka qaadday in hawlgalladaasi ka qayb qaadanayaan 11 Markab, 2 Gujis, 2 Gujis oo nooca gurmadka gunta fog ee badda, 4 diyaaradaha lidka Gujisyada iyo 4 Helikobtar.
Dabridka Xeebaha oo ka kooban 2 qaybood wuxuu wajiga 1aad ka bilaaban doonaa Vladivostokc, 18ka ilaa 21ka Septembar, wajiga 2aadna 22ka ilaa 26ka Septembar, badda Japan iyo koofurta Badda Okhostk.
Russia iyo China waxay in ka badan 10 sano si wadajir ah u sameeyaan dabridyada tababarka ah ee Militari oo ay soo bilaabeen sannadkii 2012kii. Waxayna ka midaysanyihiin mowqifkooda ka soo horjeeda waxa ay u arkaan dadaalka Maraykanku ku doonayo in uu dunida ku qabsado.